उच्च बिक्री मा प्रयोगकर्ता अनुभव परिणाम मा समय खर्च Martech Zone
शनिबार, अगस्ट 17, 2013 शनिबार, अगस्ट 17, 2013 Douglas Karr
Econsultancy को प्रयोगकर्ता अनुभव सर्वेक्षण रिपोर्टसंग संगै आयोजित WhatUserDo - एक अनलाइन प्रयोज्य परीक्षण र प्रयोगकर्ता अनुभव अनुसंधान साइट - काफी तथ्याistic्कको पर्दाफास।
व्यवसायको% 74% विश्वास प्रयोगकर्ता बिक्री, रूपान्तरण र वफादारी सुधार गर्न को लागी महत्वपूर्ण छ।
प्रयोगकर्ता अनुभव के हो?
विकिपेडिया अनुसार: प्रयोगकर्ता अनुभव (UX) मा एक विशेष उत्पाद, प्रणाली वा सेवा प्रयोग गर्ने बारे व्यक्तिको भावना समावेश छ। प्रयोगकर्ताको अनुभवले मानव-कम्प्यूटर अन्तर्क्रिया र उत्पाद स्वामित्वको प्रयोगात्मक, भावनात्मक, अर्थपूर्ण र मूल्यवान पक्षहरूलाई हाइलाइट गर्दछ।
जबकि म परिभाषासँग पूर्ण रूपमा असहमत छु, एक व्यवसायले प्रयोगकर्ता अनुभवलाई थोरै कम व्यक्तिगत रूपमा हेर्नु पर्छ। होइन सबै प्रयोगकर्ताको बारेमा, यो तपाईंको लक्ष्यहरूसँग उनीहरूको आवश्यकताहरू मिलाउन र खाली ठाउँ भर्न जानकारी, डिजाइन र नेभिगेसन प्रदान गर्ने बारेमा हो।
तपाईंको अनुभवको लागि तपाईंको साइटमा ट्र्याक गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण मेट्रिक्स:
रूपान्तरण दर - कुन प्रतिशतले तपाईंको साइटमा आइपुगेको छ र वास्तवमा नेतृत्व वा बिक्रीमा रूपान्तरण गर्दछ? तपाईले कार्यान्वयन गर्नुभयो तपाईको एनालिटिक्समा लक्ष्यहरू मूल्या increasing्कन गर्न कि यो बढ्दो छ वा छैन?
बाउन्स दर - तपाईंको साइटमा कुन दर्शकहरू आउँछन् र तुरून्त छोडिन्छन्? यो साइटको सूचक हो जुन खोज र सामाजिकको लागि अनुकूलित हुन सक्दैन ... त्यसैले आगन्तुकहरू उनीहरूले त्यहाँ फेला पार्नुहुने जानकारीको आशाको साथ आउँदैछन् तर उनीहरूले त्यसो गर्दैनन्। यदि तिनीहरूलाई खोज्ने कीवर्ड प्रासंगिक छन् भने, तब तपाईंलाई अर्को समस्या भयो ... तपाईले उपलब्ध गराउनु भएको जानकारी बाध्यकारी छैन र तपाईं तिनीहरूलाई रूपान्तरणको मार्गमा संलग्न गर्नुहुन्न।
साइटमा समय - सामान्यतया, जो कोही तपाइँको साइट मा अधिक समय खर्च गर्दछ गहिरो स engaged्लग्न हुन सक्छ, एक संकेतक कि तिनीहरू एक राम्रो नेतृत्व हो कि रूपान्तरण गर्न सकिन्छ (तपाइँको मेट्रिक्स फरक हुन सक्छ!)। गहिरो आगन्तुकलाई संलग्न गराउन तपाइँ के गर्दै हुनुहुन्छ? के तपाइँसँग भिडियो छ? ह्वाइटपेपरहरू? केस स्टडीहरू? एक ब्लग? ड्राइभ सment्लग्नता को लागी विभिन्न प्रकारको जानकारी प्रदान गर्नु कुञ्जी हो।
र यो भन्ने बिना नै गयो कि प्रयोगकर्ता अनुभव तपाईको साइटको डिजाइनमा, तपाईको ब्रान्डको सम्पूर्ण एकीकरणमा, र तपाईका आगन्तुकहरूलाई आवश्यक माध्यम र जानकारी प्रदान गर्ने कुरामा भरपर्दछ।
कहिलेकाँही, गरीब प्रयोगकर्ता अनुभव तपाईको व्यवसायलाई सम्पर्क गर्न फोन नम्बर खोज्नु भन्दा केहि कम हुन सक्छ। यो फन्ट र व्हाइटस्पेस को उपयोग हुन सक्छ कि पढ्न गाह्रो बनाउँछ। यो तपाईंको साइटको ब्रान्डि and र व्यवसायिक डिजाइन हुन सक्छ र यसले विश्वास र व्यावसायिकताको समग्र स्तरको साथ प्रयोगकर्तालाई प्रदान गर्दछ वा गर्दैन। र प्राय: जसो नभए पनि यो भ्रमपूर्ण मार्केटिंग-बोल्ने कुरा हुन सक्छ जुन तपाईंको आगन्तुकहरूलाई बुझ्न कठिन हुन्छ कि तपाईंको समाधान उनीहरूको समस्याहरूको समाधान हुन सक्छ कि सक्दैन।
तपाईंको प्रयोगकर्ता अनुभवको प्रभावलाई हल्का नबनाउनुहोस्। यदि तपाईं शंकामा हुनुहुन्छ भने यो जाँच्नुहोस्। यदि तपाईं सेवा वहन गर्न सक्नुहुन्न भने, त्यसपछि तपाईंको किशोरावस्था वा जीवनसाथीलाई समात्नुहोस् र उनीहरूको प्रतिक्रियाहरू पाउनुहोस्। तपाईं आश्चर्यचकित हुन सक्नुहुन्छ।
टैग: उछाल दरव्यापार लक्ष्यहरुरूपान्तरण दरeconsultancyफन्टहरूGoogle विश्लेषणगुगल विश्लेषक लक्ष्यहरूजानकारीबिक्री सक्षमतासाइटमा समयप्रयोगकर्ता अनुभवप्रयोगकर्ताको आवश्यकता छसेतो खाली ठाँउ
Scup: सामाजिक मीडिया निगरानी, ​​विश्लेषण र सगाई